Brunei: Twestival Mampiray ny Mpiondana Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2019 12:47 GMT
Ny 24 Martsa 2011, tao Brunei no nanao ny hetsika voalohany fanokafana azy ny Twestival, izay nanamarika andro iray manokana teo amin'ny sehatry ny media sosialy tao an-toerana. Ny teny faneva nofinidy dia ny ‘Tweet.Meet.Eat.Give‘ (Mibitsika.Mihaona.Mihinana.Manome) mba hanangonana vola ho an'ny Ivontoerana Fampivoarana ny Ankizy, ho fandraisana anjara amin'ny Andro Manerantany ho an'ny soritraretina Down. Tanjona iray hafa an'ny Twestival ny hampifandrohy ny vondrom-piarahamonina Twitter ao an-toerana ety ivelan'ny tambajotra sy hanome azy ireo fahafahana iray hifankahita mivantana.
Nisy fanamby iray fihinanana sakafo natao tao amin'ny @KitaroJapanese Restaurant nialoha ny tena Twestival, ka tamin'izany ireo mpifaninana dia tsy maintsy nihinana sushi iray lovia. Tena nanampy betsaka tamin'ny fanantontosàna ny hetsika Twestival i BorneoColours (@marul69), iray tamin'ireo tonga tamin'ny famaranana tamin'ny Fifaninanana Borneo Blogger tamin'ny taona 2010, ary nampakatra lahatsary iray ahitàna ny iray tamin'ireo nandresy tamin'ny Sumo Challenge.
Tao amin'ny Swensen's Cafe & Restaurant, ny Fanamby Swensen Goavana dia nitakiana tamin'ireo mpandray anjara mba hihinana ilay glasy lehibe im-balon'ny fandraofana, ary milanja tsirairay eo amin'ny 85 grama, natao anaty lovia iray goavana ampiarahana amin'ny ‘crème fouettée‘ sy fangaro mamy hafa. Tonga namaly ny antso sy nandray anjara tamin'ilay hetsika ireo maherifon'ny bilaogy tao an-toerana, toa an-dry @ranoadidas, @anakbrunei, Senor Pablo, @kurapak sy @maurina, raha tsy hilaza afa-tsy ireo.
Nanamarika tao amin'ny bilaoginy i @BruneiTweet, iray tamin'ireo tena mpanomana ny Twestival Brunei 2011, fa marobe ireo nanatrika ary betsaka ny vola azo tamin'ity taona ity.
Iray hafa tamin'ireo mpikarakara nanararaotra nisaotra ireo olona nanana ny naha-izy azy tonga nirotsaka an-tsitrapo mba hanampy hahatonga ny Twestival Brunei 2011 ho fahombiazana i @emmagoodegg,, tao anatin'ny lahatsorany vao haingana tao amin'ny borneocolours:
Teny an-dàlana teny izahay dia nahazo ireo olona maro manana fo antra izay nanampy tamin'ny fanamboarana ny fango (@jidah), ny resaka teknika (@thewheat, @mfirdaus & @talkingaloudbru), ireo pitsopitsony any ambadiky ny sehatra (@faeyakof & sy ny tarika @ubdfm), PR (ireo namanay eto an-toerana amin'ny resaka media sôsialy), ao anatin'ireny ireo mpanohana (Swensens & @kitarojapanese) sy ny daholobe izay tonga nandany ny volany sy ny fotoanany.
Mpamokatra rakipeo iray ao an-toerana i @talkingaloudbru izay tonga tao amin'ilay hetsika sy nahavita nanao antsafa tselika nandritra ilay hetsika nialoha ny tena Twestival tao amin'ny @KitaroJapanese Restaurant. Izy koa dia iray tamin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo nampahafantatra ny fisian'ny hetsika ary nanao ‘fandraketana mivantana’ tao amin'ny Swensens nandritra ilay tena vanimpotoana lehibe. Azonareo henoina eto ireo rakipeo tamin'ilay hetsika mialoha ny tena twestival ary eto ireo rakipeo tamin'ny Twestival Brunei .
@kurapak, iray amin'ireo bilaogera fantadaza ao Brunei, naneho ny fanohanany an'ilay hetsika tamin'ny famoronana poster mahatsikaiky iray nampiasàna ny fangon'ny Twestival Brunei teo amin'ny tranonkalany. @johnreydangilan teo amin'ny bilaoginy theasianbimbo dia nanao fampisehoana nandritra ireo hetsika roa nialoha sy ilay tena twestival .
Feno sary misimisy kokoa avy tamin'ilay hetsika azo raisina ao amin'ny bilaogin‘i@anakbrunei, tranonkalan'i @ranoadidas. Ireo nikarakara ny Twestival Brunei 2011 : @BruneiTweet, @emmagoodegg ary @zulfadly.